म अमेजनका लागि उत्तम विजेता कुञ्जी शब्दहरू कसरी पत्ता लगाउँछु?
दायाँ फोकस सेट गर्दै र अमेजनका लागि सर्वोत्तम संभावित लाभदायक कीवर्डहरू लक्षित गर्न सम्भवतः सम्पूर्ण व्यापारिक काममा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो।. चीज हो कि गहिराई खोजशब्द अनुसन्धान वास्तव मा तपाईंको बिक्री तिर प्रत्यक्ष असर छ. केवल किनकि हरेक सम्भावित ग्राहकले केवल तपाईंसँग एकपटक क्लिक गर्न र खरीद गर्न सक्दछ - यदि तपाईंको उत्पादन यहाँ खरीदारीको खोजीको शीर्षमा देखा पर्दछ. वैसे पनि, यो मतलब छ कि तपाईं मुख्य रूप देखि निम्नलिखित कार्रवाई मा एक व्यापक खोजशब्द अनुसन्धान को माध्यम ले पारित गर्नु पर्छ:
अमेजन उत्पाद रैंकिंग प्रणाली
द्वारा प्रयोग गरे A9 खोज एल्गोरिदम को स्पष्ट रूप देखि बुझें
सबै भन्दा उपयुक्त खोजी सर्तहरू
विश्लेषण र क्रमबद्ध गर्न र क्रमबद्ध गर्न मासिक खोजी भोल्युम प्रयोग गर्नुहोस् कि कसरी नयाँ उत्पादनको अवधारणाहरू र अमेजनका लागि लुकेका शब्दहरू उजागर गर्ने बारे जान्नुहोस्। लाइभ सर्पर्सर्सले अनलाइन खरीद गर्दा लामो-पूरै उत्पादन प्रश्नहरूको अनुसन्धान गरिरहनुहोस्
Amazon Seller Central (a - windows vps service. k. a. बैकइन्ड खोजी फिल्डहरू)
र फेरि यसलाई फेरि सामना गर्नुहोला - यदि तपाईंको संतोषजनक नतिजाहरू अमेजनका SERPs को सूचीमा पहिलो दुई वा तीन पृष्ठ भित्र भेट्टाउन सकिएन भने, तपाइँ तुरुन्तै ती पूर्वनिर्धारित लक्ष्यहरूलाई पुन: आरम्भ गर्नुपर्छ। खोजी प्रश्नहरू उनीहरूलाई तपाईंको मुख्य लक्ष्यको सेवा गर्न. यस तरिका, यहाँ तपाईले अमेजन उत्पाद सूची अनुकूलन गर्ने सही तरिकाको लागि आफ्नो सबैभन्दा बहुमूल्य कीवर्डहरू व्यवस्थापन गर्न चरण गाइडद्वारा छोटो कदम हो.
(1 9) चरण 1: बीज खोजशब्दहरूको हेरविचार गर्नुहोस्
प्रदर्शनका मुख्य विशेषताहरू र रोजगारीको उपयोगको बारेमा बुझ्नका लागि तपाईंको लक्ष्य उत्पादन सुविधाहरू / फाइदाहरू सिक्न आफ्नो समय र प्रयत्न नबिर्सनुहोस्।. यो कुनै नो-ब्रेनर जस्तो लाग्न सक्छ, तर यो एक साँच्चै चिन्ताजनक रेखा हो, किनकि कुनै पनि सुविधा हराइरहेको छ वा टिनिस्ट विवरण पनि तपाईंको संभावित ग्राहकहरूको उचित मात्रामा भाग मेटाउन सकिन्छ।. अन्य शब्दहरूमा, आफैलाई खरिदका जूतामा राख्नुहोस्, र तपाईंको आला / श्रेणी प्रतियोगीहरू द्वारा प्रयोग हुने उत्तम कीवर्ड खोजहरू नजिकको नजीक राख्नुहोस्।.
(1 9) चरण दुई: आकार सफा र खाली चेकलिस्ट
यहाँ बेलाबेलामा राम्रो खोजशब्द अनुसन्धान उपकरण वा अनलाइन प्लेटफार्म विशेष रूपमा छनोट गर्ने समय हो। अमेजनका लागी तपाईंको लक्षित कीवर्डको मुख्य सूची. त्यस तरिका, नबिर्सनुहोस् कि Amazon को स्वत: सुझाव गरिएका प्रश्नहरू र शीर्ष ट्रेन्डिंग खोज संयोजनहरू पनि उपयोगी छन्. र तपाईंको भोल्युम सूची खोज भोल्युम, अनुमानित स्तरको प्रतिस्पर्धा, र इरादा खरिदको आधारमा प्राथमिकतालाई सुनिश्चित गर्न सुनिश्चित गर्नुहोस्.
(1 9) चरण तीन: लामो-पाल खोज सर्तहरू परिमार्जन गर्नुहोस्
र अब यो समयको अन्तमा लामो समयसम्म खरीदारीका सर्तहरूको लागि तपाईंको मुख्य जाँच सूची को अन्त्य गर्न को लागी अधिक सटीक लक्षित गर्नका लागि।. सम्झनुहोस्, उच्च एक निश्चित किवर्डको खोज भोल्युम हो, यो अझ बढीको लागि रेट गर्न हुनेछ. यसैले उच्च ट्राफिक ल्याउन र यसैले एक सम्भावित रूपान्तरण वृद्धि दर, तपाइँसँग यी खोजी सर्तहरू क्रमबद्ध गर्न र अत्यधिक प्रतिस्पर्धा स्तरको साथ समाप्त गर्न पर्छ।. लामो समयसम्म पूरै कुञ्जी शब्दहरूमा बोलपत्र राख्नुहोस् - र तपाईले गर्नुभयो.